Manga Verde Beach 16: IParadesi emnandi - I-Airbnb
Manga Verde Beach 16: IParadesi emnandi
Indawo ekukho umntu oncedisayo kuyo yonke sinombuki zindwendwe onguAnthony
IManga Verde Beach 16 okanye iParadesi eSweet ineembono zolwandle ukusuka kwibalcony kunye nebhedi yayo eyiSuite. Xa ukwizandi eziphezulu, uya konwabela izandi eziphumlayo zamaza olwandle. Inamagumbi okulala ama-3 (kubandakanywa ne-suite), amagumbi okuhlambela ayi-2 kwaye ilele kumgangatho wokuqala.
Ukuba ujonge uxolo, ukuzola kunye nokuchukumisa ubunewunewu, le iya kuba yindawo enokubakho, enombono ogqibeleleyo wolwandle.
Njengayo nayiphi na enye indawo yokuhlala yaseManga Verde, yayihonjiswe kakuhle ngabaphathi. Izinto ezininzi zokuhombisa ziziswe ngabo kukhenketho lwabo lwehlabathi kwilizwe ngalinye kumazwe ali-193 ehlabathi. Abaphathi abahlala kuloo ndawo baya kuvuya ngakumbi ukwabelana nawe ngakumbi malunga nokuhamba okumangalisayo kunye namabali obomi.
Iindawo ekuchithelwa kuzo iiholide:
Iiflethi ezinefenitshala epheleleyo kunye nezixhobo
I-pool enkulu kunye ne-Kid pool
Indawo yokupaka yasimahla kwiNdawo
Usapho / Ubuhlobo kubantwana
I-Smart TV (isikrini esithe tyaba)
Ukubonelela ngelinen kunye neetawuli
Onke amagumbi anesimo somoya
Ukugqithiselwa kwesikhululo seenqwelomoya
Imisebenzi yasekhaya ibandakanya ukuhamba ngesikhephe, ukukhwela inqanawa, ukukhwela inqanawa, ukukhwela intaba, ukukhwela ihashe, ukukhwela ibhayisekile, ukurhuqa emanzini, ukuhamba ngesikhephe, ubomi baselwandle kunye notyelelo lwenkcubeko yelifa lesiqithi.
Sibhalele okanye usindwendwele ukuze ufumane ulwazi oluthe vetshe.
IManga Verde inezona ndawo zintle kwesi siqithi, kanye kwezona lwandle zibalaseleyo kwaye kumgama wokuhamba weForte Orange yembali, kunye nebhari yesanti emhlophe edumileyo yaseCoroa de Aviao apho unokufumana ukutya kwaselwandle okumnandi ukusuka kwiibhari zolwandle eziyinyani. Ngaphantsi kweemitha ezili-100 ukusuka apho uya kufumana i-kiteschool kuphela yesiqithi, apho umoya uya kukunika uvuyo kunye nemibono emangalisayo. Emva koko ungonwabela amanzi amatsha ekhokhonathi, okanye ibhiya ebandayo ehlaziyayo kwenye yeebhari ezincinci zaselwandle ezikufutshane.
I-Manga Verde iye yacatshangelwa kwaye yaphuhliswa liqela leengcali zaseYurophu naseBrazil ukuze zihambelane neemfuno zabakhenkethi bamazwe ngamazwe, iindwendwe zasekhaya, kunye neemarike zenkampani.
I-Itamaraca sisiqithi saseTropiki e-NE Brazil, iyure enye ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya saseRecife, kunye nebhulorho ende edibanisa nelizwe. Uninzi lwesi siqithi lunamahlathi akhuselweyo, kodwa kwicala lolwandle ziimayile zonxweme olude olunentlabathi emhlophe, ikakhulu phambi kwamakhaya eeholide eempelaveki zabantu abaphezulu kunye nezityebi zaseRecife. Lonke uhlobo lolwandle kunye nemisebenzi ye-waterport iyafumaneka kwisiqithi.
Kwicala lenkcubeko, uya kufumana eyona cawa indala kunye neyesibini indala yaseMelika engaphantsi kwemizuzu eyi-15. I-Splendid colonial Olinda-iNdawo yeLifa leMveli le-UNESCO yeHlabathi-ikwalele kumgama oziikhilomitha ezingama-30.
Ngabahlali abamalunga nama-21,000, amanani esiqithi aphuphuma kwiinyanga zasehlotyeni nakwiimpelaveki, njengoko abakhenkethi betsalwa kumanzi olwandle afudumeleyo, azolileyo, akhuselwe luqaqa olumayile ezimbini ukusuka elunxwemeni. Ekubeni sisixeko esincinci ngokwaso, i-Itamaraca inesibhedlele, izikhululo zamapolisa kunye neenqwelo zezigulane, ibhanki, iposi, iikhemesti, iihotele, iivenkile ezininzi kunye neevenkile ezinkulu, kunye neebhari kunye neeresityu ezininzi.
Ngembali esusela kwiminyaka engama-500 eyadlulayo, uluhlu olubanzi lokutya kwaselwandle okumnandi okubanjwe ekuhlaleni, kwaye kugqunywe kwimithi yeziqhamo, iilwandle ezili-13, isikolo se-kitesurfing, unokulindela ukuba amaxabiso esiqithi abe phezulu ... kodwa uya kuba ungalunganga.
Abaphathi abahlala kule ndawo baya konwaba ngakumbi ukwabelana nawe ngakumbi malunga nohambo lwabo olumangalisayo kunye namabali obomi kumazwe ali-193 ehlabathi.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Ilha de Itamaracá